I-Guangdong Qianjin Industrial ifaka imali ekwakhiweni kwephrojekthi yokukhiqiza ebandayo ebandayo engama-200,000 / ngonyaka ebekwe eShizong, eYunnan - China Foshan Hermes Steel
IGuangdong Qianjin Industrial itshala imali ekwakhiweni kwephrojekthi yokukhiqiza ebandayo ebandayo engama-200,000 / ngonyaka ebekwe eShizong, eYunnan
IGuangdong Qianjin Industrial itshala imali ekwakhiweni kwephrojekthi yokukhiqiza ebandayo ebandayo engama-200,000 / ngonyaka ebekwe eShizong, Yunnan
Eminyakeni yamuva nje, iShizong County ilandele umqondo "wokugcwalisa uchungechunge, ukunweba iketanga, nokuqinisa iketanga", ngokuthembela kumathani akhona ayizigidi eziyi-1.575 wensimbi engagqwali izinzuzo zokukhiqiza insimbi engahluziwe, ngokuhlakulela ngenkuthalo nokwelula insimbi engagqwali steel chain chain, futhi ulwela ukwakha insimbi engagqwali iqoqo lezimboni, futhi ulwele ukwenza iShizong The County Stainless Steel Industrial Park yakhelwe edolobheni laseYunnan okuyiwona wodwa owakhiwe ngensimbi engagqwali eningizimu-ntshonalanga.
Ngokwalolu hlelo, iShizong County Stainless Steel Industrial Park inendawo ehleliwe engamahektha angama-279.76 kanye nokutshalwa kwemali okulinganiselwa ku-7.81 billion yuan. Kulinganiselwa ukuthi ngo-2025, izofinyelela imali engenayo yokuthengisa engu-62.8 billion yuan, inzuzo ephelele engu-1.81 billion yuan, kanye nentela ephelele engu-1.26 billion yuan. Kuhlelwe ukuthatha iminyaka emi-3 kuye kwengu-5 ukwakha iShizong County Stainless Steel Industrial Park ibe uhlobo oluthuthukisiwe lwalo lonke uchungechunge lwezimboni ezisukela kuzinto zokusetshenziswa, ukuncibilikisa, ukushisa okushisayo, ukucubungula okubandayo okugudluzwayo okujulile, kanye nemikhiqizo ehlukahlukene engagqwali yokwakha iqoqo lezimboni lezinsimbi ezingagqwali elinezindiza ezithwala izindiza.
Imboni yensimbi engenasici iqale ngeYunnan Tiangao Nickel Industry Co., Ltd., eyaheha utshalomali ngo-2009. Ulayini wokukhiqiza insimbi engagqwali waqedwa futhi waqalisa ukusebenza ngo-Agasti 2012. Ngokuhamba kwesikhathi, imboni eyodwa kanye nemikhawulo yezimboni engaphelele ukuthuthukiswa nokukhula kwemboni yensimbi engagqwali kaShizong.
Ukuze kudlalwe ngokugcwele kuzinzuzo eziyingqayizivele zamathani ayi-1.575 wezigidi zensimbi engagqwali amandla wokukhiqiza insimbi, iShizong County yethule iQujing Dachang Trading Co., Ltd., iChongqing Cuizhiyuan Enterprise Management Co., Ltd. neShizong County Fangwei Investment kanye ne-Development Co, Ltd. ngokukhuthaza ukutshalwa kwezimali. IShizong County Wolaidi Metal Materials Co., Ltd., enotshalo oluphelele lwezigidi ezingama-870 yuan, izokwakha amathani ayisigidi esingu-1.4 womugqa wokukhiqiza oshisayo we-1780mm kanye namathani ayi-300,000 we-1450mm annealing thermal and pickling production line. Iphrojekthi iqale ukwakhiwa ngoMeyi 29, 2018 futhi izophothulwa ngo-2019. Iphrojekthi yaqedwa futhi yaqala ukukhiqizwa ngo-Okthoba 18, 2010. Ukuqedwa kwephrojekthi kuvale isikhala ekukhiqizeni insimbi ebanzi eYunnan. Kubikwa ukuthi umugqa wokukhiqiza wokushisa oshisayo kaVolody uyisethi yokuqala ephelele yomugqa wokukhiqiza wokugaya owenziwe ngokuzimela eChina. Yamukela ubuchwepheshe obuthuthukisiwe njengokulethwa okushisayo nokushaja okushisayo kwama-slabs, ubukhulu be-hydraulic, isilawuli sobubanzi be-othomathikhi nobunye ubuchwepheshe obuthuthukile ekukhiqizeni amapuleti ekhaya nakwamanye amazwe. Rolling imikhiqizo ehlukahlukene ephezulu engagqwali.
EShizong County Stainless Steel Industrial Park, iShizong County Wo Laidi Metal Material Co, Ltd. ingenye yezinkampani eziningi epaki lezimboni lensimbi engagqwali, futhi iyisixhumanisi esisodwa ochungechungeni lwezimboni zensimbi engagqwali.
Ngo-2020, iShizong County Wolaidi Metal Material Co., Ltd.izokhiqiza amathani angama-680,000 wamakhoyili ahlukahlukene ensimbi, ngenani lokukhipha lama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezinhlanu kanye nenzuzo yama-yuan ayizigidi eziyi-170. Ngasikhathi sinye, yethule ngempumelelo i-Yunnan Jingzhong New Materials Co, Ltd. ngokukhishwa kwaminyaka yonke kwamathani ayi-200,000 wokugoqa okubandayo nobubanzi beGuangdong Qianjin Industrial ukuze kutshalwe imali ekwakhiweni kwamathani ayi-200,000 wobubanzi obubanzi bokukhiqizwa kwamakhaza amaphrojekthi, kanye nokuxhasa ukwakhiwa kokugunda insimbi engagqwali, i-electroplating neminye imigqa yokukhiqiza. Amabhizinisi emikhiqizo yensimbi engagxili esezansi adinga ukuhlinzeka ngezinhlobonhlobo zamapuleti wensimbi engagqwali, amapayipi, njll., Okugcwalisa lonke uchungechunge lokwakhiwa kwemboni yensimbi engagqwali futhi kuvule “imayela lokugcina” elivimbela ukuthuthukiswa kwendawo engenazinsimbi yesifunda umkhakha wensimbi.
Ngokuthuthukiswa kochungechunge lwensimbi engagqwali, uSichuan Guojinrong Metal Material Co, Ltd., uSichuan Pengzhou Zhongxin Metallurgy Co, Ltd., kanye noChengming New Materials Co, Ltd. baqale ukwakha amaphrojekthi wokukhiqiza amapuleti namapayipi. Njengamanje, sekuzophothulwa ukwakhiwa kwamawekshophu afanayo. Kulindeleke ukuthi kuqedwe futhi kufakwe ekukhiqizeni ngoJuni 2021.
Isikhathi Iposi: Apr-10-2021